Izinga lokushisa e-Antarctica lingakhuphuka ngama-degree angama-6 ngo-2100 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
La I-Antarctica. Izwekazi elibandayo, elinendawo emhlophe ebabazekayo, njengoba iplanethi ifudumeza iqhwa layo. Umphumela we-albedo unje: imisebe yelanga ishaya iqhwa, okuthi uma limuncwa, lilahlekelwe ukuqina kwalo kuze kube yilapho ligcina selichithwa ulwandle.
Ngalesi sizathu, izingongolo yizifunda ezisengozini enkulu ekushintsheni kwesimo sezulu. Endabeni ye-Antarctica, izinga lokushisa lingakhuphukela kuma-degree angama-6 ngasekupheleni kwekhulu leminyaka.
Isithombe - Izinqubo zeNational Academy of Sciences
Ngemuva kweminyaka yokugcina yeqhwa, eminyakeni engama-20.000 XNUMX edlule, I-Antarctica ifudumeze kabili noma kathathu isilinganiso sokukhuphuka kwamazinga okushisa emhlabeniNgokuya ngocwaningo olushicilelwe ephephabhukwini lesayensi i-Proceedings of the National Academy of Sciences, kuze kube seqophelweni lokuthi ibhalise izinga lokushisa elingajwayelekile: 11 degrees Celsius, lapho into ejwayelekile ukuthi ingamazinga ambalwa ngaphansi kuka-zero. Kuyo yonke iplanethi, inyuke kuphela cishe ngama-4 degrees Celsius.
Ososayensi basebenzise amamodeli wesimo sezulu womhlaba wonke asetshenziselwa ukuhlaziya isimo sezulu somhlaba eminyakeni engama-20.000 XNUMX eyedlule, okufana nalawo asetshenziselwa ukubikezela ukushisa komhlaba esikhathini esizayokusho uKurt Cuffey, umbhali wokuqala walolu cwaningo nesazi se-glaciologist e-University of California, eBerkeley.
Ngakho-ke, bangakubikezela lokho ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu kwamanje I-Antarctica izoshisa ngokuphindwe kabili kunayo yonke iplanethi; okusho ukuthi, esimweni lapho izinga lokushisa lomhlaba jikelele likhuphuka ngo-3 degrees Celsius, okungukuthi ngokusho kwamamodeli okungenzeka ukuthi kwenzeke, i-Antarctica izofudumala cishe ngo-6ºC.
Ngamanye amagama, uma singenzi lutho ukunqanda ukufudumala kwembulunga yonke, imiphumela ye-Antarctica nezwe ingaba yinkinga enkulu kithina sonke esihlala kulo mhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Izinga lokushisa e-Antarctica lingakhuphuka ngama-degree angama-6 ngasekupheleni kwekhulu leminyaka